Burma « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Posts tagged 'Burma'
အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကို သင်းတန်းပေးဖို့ ကူညီပေးတဲ့ ဥိးတေဇ ကို လက်ရှိ အစီုးရ က သတိပေး
16/02/2016 13:37 / Leaveacomment
အဖွဲ့ချုပ်ရွေးချယ်ခံ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေး သင်တန်းများ ကိုတာဝန်ပေးချက် အရတာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါတယ်
လွတ်တော်မတက်မှီ အပြီးစီစဉ် ရမှာမို့လို့ ချက်ချင်းစီစဉ်ရပါတယ်
သင်တန်းအတွက် ဦးတေဇ ကို ကျွန်တော် အကူအညီ တောင်းခဲ့ ပါတယ်
အဲ့ဒီ လို ကူညီပေးမှု အတွက် လက်ရှိအစိုးရ အဖွဲ့ က ဥိးတေဇ ကို အရေးယူခံရ. မယ်လို့ သတိပေး ခြိမ်းခြေက်ခဲ့ ပါတယ်
နေပြည်တော် သင်တန်းကာလ အတွင်းမှာ တင် သင်တန်းရပ်နား ဖို့ ( ရှင်းရှင်း ပြောရ ရင် မောင်းထုတ်ဖို့ ) လာရောက်ဖိအားပေးတယ် လို့ သိရှိရ ပါတယ်
မနေ့ က ပဲ နေပြည်တော် ရွေစံအိမ် ဟိုတယ် ကို သင်တန်းဖွင့် ခွင့် ပေး တဲ့ အတွက် မတန်မရာ လုပ်တယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံ မျိုး အောက်ပါစာကိုထုတ်ခဲ့ ပါတယ်
၁၆ – ၂ – ၂၀၁၆
နေ့လည် ၁နာရီ ၄၉ မိနစ်
U Tay Za pressured by U Thein Sein government because of providing accommodation for elected NLD MPs
#Myanmar အမေစု နဲ့ CBS News Agency အင်တာဗျူး ပါ
27/10/2015 20:11 / Leaveacomment
#Burma အမေစု နဲ့ CBS News Agency အင်တာဗျူး ပါ ။ ဗီဒီယို ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အနောက်တိုင်း မီဒီယာများ က အမေစု အရှိန် ၊ ရွေးကောက်ပွဲအရှိန်ကိုသုံး ပြီး ၊ သူတို့ လိုခြင်သောအရာကို အတင်းထိုးတင်နေပါတယ် ။ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးလဲသွေးထိုးထားပါတယ် ။ ပြည်သူအပေါင်းသတိရှိကြပါ ။ ခင်မင်လေး စားစွာဖြင့် BDC Burma
ရွှေ ဆိုသည်မှာ… … ရွှေ အခေါ်အဝေါ်နှင့်တွက်ချက်နည်းများ
12/07/2015 10:16 / Leaveacomment
ရွှေ ဆိုသည်မှာ… …
Symbol of gold = Au (Aurum) (Latin word) (အရုဏ်ဦးအလင်းရောင်)
Atomic number of gold = 75 Atomic mass of gold = 196.96655 amu Density of pure gold = 19.4 g/cm3(Normally 19.32 , 19.2)
Melting point = Boiling point = Quality (Purity) of pure gold = 24 carats
ပေါကြွယ်ဝမှုအဆင့် = ၇၅ Resistance အနည်းဆုံးသတ္ထု
( 1 troy ounce မှာ ၃၅ ~ ၅၀မိုင် )
(၂) ပိဿာ
၁ ပိဿာ၁၀၀ ကျပ်
၁ ကျပ် = ၁၆ ပဲ
၁ ပဲ = ၇.၅ ရွေး (မန္တလေး) ၊
၁ ပဲ = ၈ ရွေး (ရန်ကုန်)
၁ ကျပ် = ၁၂၀ ရွေး (မန္တလေး) ၊
၁ ကျပ် = ၁၂၈ ရွေး (ရန်ကုန်)
၂ ပဲ = ၁ မူး
၄ ပဲ = ၁ မတ်
၈ ပဲ = ၅ မူး
၁၂ ပဲ = ၃ မတ်
၁/၄ (၀.၂၅) ရွေး = ၁ စိပ်
၁/၂ (၀.၅) ရွေး = ၁ ခြမ်း
၃/၄ (၀.၇၅) ရွေး = ၃ စိပ်
1 troy ounce = 31.1034768 g = 1.875ကျပ် (1.9047 ကျပ်)
1 ကျပ် = 16.6 g = 0.0166 kg
ရွှေဈေးနှုန်းသည် ၁ကျပ်သားဈေးနှုန်းသာရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွှေ ၀ယ်/ရောင်းသည့်အခါ ကျပ်ဖွဲ့၍ ပေါက်ဈေးဖြင့်တွက်ချက်ရပါသည်။
ရွေး / ၇.၅ + ပဲ / ၁၆ + ကျပ် = ကျပ်
၁ကျပ် ၂ပဲ ၃ရွေး ကို ကျပ်ဖွဲ့လိုပါ ၃ / ၇.၅ = ၀.၄ +၂ = ၂.၄ / ၁၆ = ၀.၁၅ + ၁ = ၁.၁၅ ကျပ်
ဒေါ်လာလဲဈေး x ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး / ၁.၈၇၅ = မြန်မာ့ရွှေဈေး (မီးလင်းရွှေဈေး , အခေါက်ရွှေဈေး , ၁၆ပဲရည်ရွှေဈေး
အပြန်အလှန်အားဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် ဒေါ်လာလဲဈေးတွက်လိုပါက
မြန်မာ့ရွှေဈေး / ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး x ၁.၈၇၅ = ၁ဒေါ်လာလဲဈေး
၁၅ / ၁၆ x မီးလင်းပေါက်ဈေး
၁၆ / ၁၇ x မီးလင်းပေါက်ဈေး
၁၆ / ၁၈ x မီးလင်းပေါက်ဈေး = ၁၄ပဲရည်ဈေး
၁၆ / ၁၉ x မီးလင်းပေါက်ဈေး = ၁၃ပဲရည်ဈေး
၁၆ / ၂၀ x မီးလင်းပေါက်ဈေး = ၁၂ပဲရည်ဈေး
ရောစပ်မည့် ၁ပဲ ( ဘော် ၆ရွေး > ၊ ကြေးနီ ၁.၅ရွေး < ) (အဖန်စပ်) (အစိမ်း)
ရောစပ်မည့် ၁ပဲ ( ဘော် ၅ရွေး < ၊ ကြေးနီ ၂.၅ရွေး > ) (အငန်စပ်) (အနီ)
ရွှေဆိုသည်မှာ ဈေးလျှော့၍ ရောင်းနိုင်သော ရောင်းကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။ ဈေးလျှော့၍ရောင်းသောရွှေထည်များသည် ၁၅ပဲရည်အောက်ရွှေထည်များသာဖြစ်လိမ့်မည်။
အမေရိကန် coin ( ၁ကျပ် ၊ ၂ကျပ် ) ( ၁ကျပ်သားမှာ အခြားသတ္ထု ၁၂ရွေးသားရောထားတဲ့ရွှေ )
အင်္ဂလန် coin ( ၁မတ် ၊ ၅မူး ) ( ၁ကျပ်သားမှာ အခြားသတ္ထု ၁၃ရွေးသားရောထားတဲ့ရွှေ )
၁၂၀ – ရောစပ်ထားသောဘော်/ကြေးနီ(ရွေး) / ၁၂၀ x မီးလင်းပေါက်ဈေး = ဒင်္ဂါးရွှေဈေး
အပြန်အလှန်အားဖြင့် ရောစပ်ထားသောဘော်/ကြေးနီ(ရွေး) = ဒင်္ဂါးရွှေဈေး / မီးလင်းပေါက်ဈေး x ၁၂၀ – ၁၂၀
(၇) ပါသည့်ငွေဖြင့်ရွှေဝယ်လျှင်ရမည့်ရွှေ = ပါသည့်ငွေ / မီးလင်းပေါက်ဈေး
ပါသည့်ငွေ = ၆၃၄,၅၀၀ကျပ် ၊
မီးလင်းပေါက်ဈေး = ၇၂၄,၅၀၀ကျပ် ဖြစ်လျှင်
ရရှိမည့် မီးလင်းရွှေချိန်တန်ဘိုး = ၁၄ပဲ
ရရှိမည့် ၁၅ပဲရည်ရွှေချိန်တန်ဘိုး = ၁၄ပဲ ၆.၅ရွေး
အရိုင်းရွှေကျပ်ဖွဲ့ပါ M+ မီးလင်းရွှေကျပ်ဖွဲ့ပါ /
MRC – 1 x 120 = ၁ကျပ်သားကျွတ်နှုန်း
ရွှေရိုင်း = ၉ကျပ် ၉ပဲ ၃ရွေး ၊
မီးလင်း = ၇ကျပ် ၈ပဲ ၂ရွေး ဖြစ်လျှင်
ကျွတ်နှုန်း = ၂၅.၉ရွေး
ရွှေရိုင်း = ၃၅ကျပ် ၁၁ပဲ ၃.၅ရွေး ၊
မီးလင်း = ၃၃ကျပ် ၁၀ပဲ ၂.၅ရွေး ဖြစ်လျှင်
ကျွတ်နှုန်း = ၆.၉ရွေး
(၉) ရွေး120 – ကျွတ်မည့်ရွေး / 120 x မီးလင်းပေါက်ဈေး = အရိုင်း၁ကျပ်သားဝယ်ဈေး
(၁၀) ရွေး120 – ကျွတ်မည့်ရွေး / 120 x မီးလင်းပေါက်ဈေး / 50 (ရွေးကြီး) = အရိုင်း၁ရွေးသားဝယ်ဈေး
(၁၁) ရွေးကြီး၁လုံးခန့်မှန်းဝယ်ဈေး x 6000 / မီးလင်းပေါက်ဈေး – 120 = ကျွတ်မည့်ရွေး ( ကျွတ်နှုန်း)
(၁၂) Troy ounce unit
The troy ounce (oz t) isaunit of imperial measure. In the present day it is most commonly used to gauge the mass of precious metals. One troy ounce is currently defined as exactly 0.0311034768 kg or 31.1034768 g. One kilogram is equal to 32.1507 troy ounces. One troy ounce is equal to 1.09714286 avoirdupois ounces.
Troy weight isasystem of units ofmass customarily used for precious metals and gemstones. There are 12 troy ounces per troy pound, rather than the 16 ounces per pound found in the more common avoirdupois system. The troy ounce is 480 grains, compared with the avoirdupois ounce, which is 437½ grains. Both systems use the same grain defined by the international yard and pound agreement of 1959 as exactly 0.06479891 gram.
(၁၃) The purity scale used for gold
The carat or karat (symbol: K or kt) isaunit of purity for gold alloys. Carat purity is measured as 24 times the purity by mass:
X = 24 x Mg / Mm
Therefore, 24-Carat gold is fine (actually 99.9% Au rather than 100%), 18-Carat gold is 18 parts gold6parts another metal (forming an alloy with 75% gold), 12-Carat gold is 12 parts gold (12 parts another metal), and so forth. If you had 24 grams of gold and all of it was gold i.e. pure, it would be 24-karat gold. If I had 24 grams of gold and 22 grams of it was gold, the other2grams being copper for instance, the bullion would be 22 karats.
In England, the carat was divisible into four grains, and the grain was divisible into four quarts. For example,agold alloy of fineness (that is, 99.2% purity) could have been described as being 23-carat, 3-grain, 1-quart gold
The carat is alsoaunit of mass equal to 200 mg (0.2 g ; 0.007055 oz) and is used for measuring gemstones and pearls.
နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးသူများ၏ နိုင်ငံခြား ဘဏ်စာရင်းများလော၊ ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိရှိသော မြန်မာအကောင့် ငါးခု
12/07/2015 09:50 / Leaveacomment
12 September 2013 ·
နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးသူများ၏ နိုင်ငံခြား ဘဏ်စာရင်းများလော၊ ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိရှိသော မြန်မာအကောင့် ငါးခုကို အစိုးရအနေဖြင့် ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းရန် လိုလာ
မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားဘဏ်များတွင် ဘဏ်စာရင်း ငါးခုဖွင့်ကာ အပ်နှံထားသည့် ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိ ရှိနေပြီး အဆိုပါ ဘဏ်စာရင်းများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အကြွေးလျှော်ပေးမည့် အခွင့်အရေး လက်လွှတ်ခဲ့ရကာ နစ်နာရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေနှင့် ဘဏ်စာရင်း ငါးခုအတွက် ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်လာသည်ဟု စီးပွားရေး ပညာရှင်များက ဆိုသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိရှိသော ဘဏ်အကောင့်ငါးခုကို နိုင်ငံခြားဘဏ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အပ်နှံထားသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အကြွေးလျှော်မပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ် အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာက စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွင် တင်ရှိနေသည့် အကြွေးမှာ ကြွေးမြီစုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၉၀ ကျော် တင်ရှိနေကြောင်း၊ တစ်ဘီလျံပင် မရှိသည့် ယင်းပမာဏသည် နဂိုချေးထားသည့်ငွေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အကြွေးဟောင်းမှ အတိုးများ တက်လာခြင်းကြောင့် စုစုပေါင်း အကြွေးမှာ တစ်ဘီလျံနီးပါးအထိ ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပတွင်ဘဏ်စာရင်း ငါးခုတည်းဖြင့် အပ်ထားသည့်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိ ရှိနေခဲ့ကြောင်းကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Mr.Jelson Garcia က ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းကဆက်လက်၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အနေဖြင့် နိုင်ငံတစ်ခုခုမှ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ယခင်အစိုးရ လက်ထက်များက တင်ရှိသည့် အကြွေးများ လျှော်ပေးရန် တောင်းဆိုပါက လျှော်ပေးလေ့ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကဲ့သို့ အခွင့်အရေး မပေးရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ပြည်ပတွင် ဘဏ်စာရင်း ငါးခုဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိ အပ်နှံထားသည့် အကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကို အစိုးရသစ်နိုင်ငံအသစ် ဖြစ်သွားလို့ အရင်အကြွေးဟောင်းကို ထားလိုက်တော့လို့ လုပ်လို့မရဘူး။ တခြားနိုင်ငံတွေဆိုရင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က လျှော်ပေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာလို့လျှော်မပေးလဲဆိုရင် ကမ္ဘာ့ဘဏ် စာရင်းဇယားတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံက အပြင်မှာ ကိုင်ထားတဲ့ ဘဏ်အကောင့် ငါးခုရှိတယ်။ ဘယ်သူအကောင့်တွေလဲဆိုတာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က သိတယ်။ အဲဒီအကောင့် ငါးခုမှာ ၁၁ ဘီလျံအထိ ရှိနေတယ်။ အကြွေးအားလုံးပေါင်းမှ တစ်ဘီလျံတောင် မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံကို မေးခွန်းထုတ်တယ်။ အကြွေးတွေလည်း လျှော်မပေးခဲ့ဘူး” ဟုလည်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Mr. Jelson Garcia က ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအား ကြွေးမြီနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းသုံးခု ပေးခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် အဆိုပါ ဘဏ်စာရင်းငါးခုကို လုံးဝမထိသည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သူများ အနေဖြင့် အဆိုပါ ဘဏ်စာရင်းငါးခုနှင့် ပတ်သက်၍ မသိကြသေးကြောင်း ၎င်းကထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
Mr.Jelson Garcia က “အဲဒီအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို Option သုံးခု ထုတ်တယ်။ ၁၁ ဘီလျံရှိတဲ့ ဘဏ်အကောင့် ငါးခုထဲကထုတ်ပြီး ဒီအကြွေးတွေ ပြန်ဆပ်မလား။ ဒါမှမဟုတ် ကြားကနေပြီး အကြွေးဟောင်းကိုဆပ်ပြီး အကြွေးသစ်ကို လုပ်ပေးတဲ့သူကို ရှာမလား။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတကာက အလှူရှင်တွေပေါင်းပြီး Trust Bank လိုမျိုး ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကို ရန်ပုံငွေလိုများ လုပ်မလားဆိုပြီး ထုတ်တယ်။ အဲဒီမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုတိယအချက်ကို ရွေးလိုက်တယ်။ အကောင့်ငါးခုကို သွားမထိဘူး။ အဲဒီအကောင့် ငါးခုကို ခုထိမြန်မာပြည်သူတွေ မသိသေးဘူး” ဟု Mr.Jelson Garcia က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အကြွေးဟောင်းဆပ်ပြီး အကြွေးသစ် လုပ်ပေးနိုင်သူ ရှာခဲ့ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ရှိနေသည့် ကြွေးမြီများကို ၀င်ရောက်ဖြေရှင်း ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ ပေးဆပ်ရမည့် အကြွေးများကို ဂျပန်နိုင်ငံက ဖြေရှင်းပေးသည့်အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ ပေးဆပ်ရမည့်အကြွေး ကျေသွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါအကြွေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၉၀ ကျော်အား ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံဆိုသည့် ပမာဏမှာ မြန်မာ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ ပြည်ပသို့ လေးနှစ်နီးပါး ရောင်းချမှုမှ ရရှိသည့်ငွေ စုစုပေါင်းနှင့် ညီမျှသော ပမာဏဖြစ်ရာ များပြားလွန်းနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးပို့ကုန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့အား ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ လေးနှစ်တိတိ တင်ပို့ရာတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလျံကျော်သာ ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ချေးယူထားပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ပြည်ပသို့ ပြန်ဆပ်ရန်ကျန်သည့် အကြွေးစုစုပေါင်း ပမာဏသည်ပင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံကျော်သာ ရှိသည်။
နိုင်ငံတွင် အကြွေး ၁၁ ဘီလျံ ရှိနေချိန် နိုင်ငံတော် အစိုးရသည်ပင် အကြွေးဆပ်ရန် မထိရဲခဲ့သော ဘဏ်စာရင်း ငါးခုထဲတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိ ရှိနေပြီး အဆိုပါ ဘဏ်စာရင်း ငါးခုကြောင့်လည်း နိုင်ငံတော် အနေဖြင့် အကြွေးလျှော်ခွင့်ရမည့် အခွင့်အရေးမှာ လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည်။
၎င်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံများထံမှ ဥပမာ-တရုတ်နိုင်ငံမှ အတိုးနှုန်း ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပေးရမည့် ချေးငွေများကိုမူ ရယူသုံးစွဲနေရချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံကို အတိုးနှုန်း နှစ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အောက်သာ ပြန်ရမည့် နိုင်ငံခြားဘဏ်များတွင် သွားရောက်အပ်နှံထားသည့် နိုင်ငံမှာ နစ်နာရပြန်သည်။
အတိုးများများဖြင့် ယူသုံးပြီး အတိုးနည်းနည်းသာ ပြန်ရမည့် ဘဏ်များတွင် ယခုကဲ့သို့ သွားရောက်အပ်နှံထားခြင်းမှာ မည်သည့်ငွေများအား မည်သူက မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် အပ်နှံထားသည် ဆိုခြင်းကို အစိုးရအနေဖြင့် ရှင်းလင်းသင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဘဏ်စာရင်းများမှာ အစိုးရ ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ဘဏ်စာရင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက ပိုင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်စာရင်း ဟုတ်မဟုတ် ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်လာသည်။
နိုင်ငံတော်၏ သစ်၊ ကျောက်မျက်၊ တွင်းထွက်၊ သတ္တု၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အပါအ၀င် နိုင်ငံ့သယံဇာတများ ရောင်းချထားရာတွင် ရသည့်ငွေများ ပါမပါ၊ နိုင်ငံခြားမှ နိုင်ငံအတွက် ချေးယူထားသောငွေများ ပါမပါ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူများမှ ရသည့်ငွေများ ပါမပါ စိစစ်သင့်ပြီ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ဖော်ထုတ်အသုံးချရန်အတွက် လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံထားသည့် ဥပမာအားဖြင့် လက်ရှိအချိန်အထိ ယွမ်ငွေခုနစ်ဘီလျံအထိ မြှုပ်နှံထားသည်ဆိုသော မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပါအ၀င် စီမံကိန်းပေါင်း များစွာဖြင့် ပတ်သက်ခဲ့သည့်ငွေများ အဆိုပါ ဘဏ်စာရင်းများထဲ၌ ပါနေခြင်း ရှိမရှိမှာလည်း စိစစ်ရှင်းလင်းရမည့် အချက်များထဲတွင် ပါဝင်သည်ဟု စီးပွားရေး ပညာရှင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံနစ်နာသည့်အတွက် အဆိုပါ ဘဏ်စာရင်း ငါးခုအား နိုင်ငံတော် အစိုးရ အနေဖြင့် မဖြစ်မနေ ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်လာကြောင်းနှင့် အဖွဲ့ဖွဲ့စစ်ဆေးရန် လိုအပ်လာကြောင်း၊ အရေးယူသင့်လျှင်ပင် အရေးယူရမည် ဖြစ်သည်ဟု ဥပဒေနှင့် စီးပွားရေး ပညာရှင်တစ်ဦးက ထောက်ပြခဲ့သည်။
ဥပဒေနှင့် စီးပွားရေး ပညာရှင်တစ်ဦးက “ဒါက အရင်အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင်လည်း ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရင် စစ်ဆေးအရေးယူခွင့် ရှိတယ်။ ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ခဲ့သလား၊ မလုပ်ခဲ့ဘူးလား ဆိုတာကို အစိုးရအနေနဲ့ အဖွဲ့ဖွဲ့စစ်ပြီး အများပြည်သူကို ချပြသင့်ပြီ။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ဆိုရင်လည်း အရင်အစိုးရ လက်ထက်က လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဥပဒေနဲ့ မညီဘူးဆိုရင် စစ်ဆေးအရေးယူခွင့် ရှိတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံက ငွေအမြောက်အမြားကို အတိုးနှစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲ ရမယ့် နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေမှာ အပ်ပြီး ကိုယ်ကအတိုးနှုန်း ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပေးရမယ့် ချေးငွေကို ပြည်ပဘဏ်တွေက ပြန်ချေးပြီး သုံးနေတာက Foreign Exchange Regulation Act နဲ့လည်း ငြိနိုင်သလို Money Laundary နဲ့လည်း ငြိနိုင်တယ်။ ဘယ်တုန်းက လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ ဥပဒေနဲ့မညီရင် ပြန်ဖော်ထုတ် အရေးယူလို့ရတယ် ဆိုတဲ့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့လည်း ကိုက်ညီလို့ အစိုးရအနေနဲ့ ဒါကိုရှင်းလင်းပြီး အများပြည်သူကို ချပြသင့်တယ်” ဟု ထောက်ပြခဲ့သည်။
စီးပွားရေး ပညာရှင် တစ်ဦးကလည်း “ဒီလောက်များပြားတဲ့ ငွေပမာဏ သွားအပ်ထားတယ်ဆိုတော့ ဒါတွေက ဘယ်ကငွေတွေလဲ။ နိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတ ရောင်းထားတဲ့ ငွေတွေပါလား။ စီမံကိန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လာဘ်လာဘတွေ ပါနေသလား ဆိုတာပါ စစ်သင့်တယ်။ အရင်လက်ထက်က လုပ်ထားလို့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီပါ့မလားဆိုရင် ညီတယ်။ လာဘ်လာဘငွေတွေ ပါနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက လာဘ်စားခိုင်းလို့လဲ၊ အဲဒီအတွက် ပြန်စစ်ပြီး အရေးယူလို့ ရတယ်။ နိုင်ငံက ဘဏ္ဍာငွေ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့အချိန် ဒီလိုအပ်နိုင်တာမျိုးက နိုင်ငံဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးစား လုပ်ထားတာ ဟုတ်၊ မဟုတ်ကိုပါ စစ်သင့်ပါတယ်” ဟုလည်း ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် အတိုးနှုန်းမြင့်မားစွာ ပေးရလေ့ရှိသော တရုတ်နိုင်ငံမှ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အထိပင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀၀ ကျော်နှင့် တရုတ်ယွမ်ငွေ သန်း ၂၀၀၀ ကျော် ပမာဏအထိ ချေးယူသုံးစွဲ ထားရကြောင်း၊ ယင်းအပြင် ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်လည်း အတိုးနှုန်း ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးရမည့် ချေးငွေအပါအ၀င် ချေးငွေစုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၂၀ ကျော်အထိ ထပ်မံချေးယူ ရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အထိလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆပ်ရန်ကျန်သည့် ချေးငွေများထဲတွင် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းသို့ပင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁၃၁ ဒသမ ၇၄၄ သန်းအထိ ပြန်ဆပ်ရန် ကျန်နေသေးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် အတိုးနှုန်း မြင့်မားစွာဖြင့် ယူထားသော ချေးငွေများ အပါအ၀င် ပြည်ပချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံကျော်အထိ ရှိနေချိန်၊ ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် လူမှုဘ၀ အကျပ်အတည်းများကို အစိုးရသစ် ကာလအတွင်း ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သေးသည့် အချိန်တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လေးနှစ်ခန့်ရောင်းမှရမည့် ငွေပမာဏ၊ နိုင်ငံတကာ အကြွေးအားလုံးကို တစ်ချက်တည်းဖြင့် အကြေဆပ်နိုင်သည့် ငွေပမာဏများကို နိုင်ငံခြားတွင် အပ်နှံထားနိုင်သည် ဆိုခြင်းမှာ နိုင်ငံတကာအပြင် အများပြည်သူ အနေဖြင့်လည်း မေးခွန်းထုတ်ရမည့် ကိစ္စဖြစ်ပြီး အစိုးရအနေဖြင့်လည်း ရှင်းလင်းဖော်ထုတ် ချပြရမည့် ကိစ္စရပ်ကြီးတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်မီ ချေးယူခဲ့သည့် ချေးငွေများအတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ကျန်ရှိသည့် ပြည်ပချေးငွေများ (အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း)
အေဒီဘီချေးငွေ ၃၅၆ ဒသမ ၉၃၅
အိုင်ဒီအေချေးငွေ ၈၀၀ ဒသမ ၅၉၀
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၅၃ ဒသမ ၀၃၉
ဂျာမနီနိုင်ငံမှချေးငွေ ၅၈၄ ဒသမ ၇၂၈
ဂျပန်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၆၃၈၈ ဒသမ ၃၂၀
ကနေဒါနိုင်ငံမှချေးငွေ ၈ ဒသမ ၀၅၆
ဖင်လန်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၄ ဒသမ ၈၁၂
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၈၄ ဒသမ ၀၀၆
အီတလီနိုင်ငံမှချေးငွေ ၆ ဒသမ ၀၉၀
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၉ ဒသမ ၇၅၆
နော်ဝေနိုင်ငံမှချေးငွေ ၃၇ ဒသမ ၁၂၆
သြစတြီးယားနိုင်ငံမှချေးငွေ ၃၇ ဒသမ ၀၂၇
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၃၆ ဒသမ ၅၅၂
စုစုပေါင်း ၈၄၀၈ ဒသမ ၃၄၈
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့မှု ပမာဏ
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၂၀၃၉ .၁၃
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၂၅၂၀ .၇၄
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၂၃၈၄ .၆၉
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၂၉၂၆ .၆၉
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၅၂၂ .၅၃
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၃၅၀၂ .၅၂
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၃၇၀၀ နှင့် အထက်
၁၉၈၈ ခုနှစ် နောင်ပိုင်း ချေးယူခဲ့သည့် ချေးငွေများအတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ကျန်ရှိသည့် ပြည်ပချေးငွေများ
အိုပက်ချေးငွေ ၂၂ ဒသမ ၆၄၈
တရုတ်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၂၁၃၁ ဒသမ ၇၄၄
စုစုပေါင်း ၂၆၁၄ ဒသမ ၉၅၀
Myo Htike Tan Thein
ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် (DKBA) ဗိုလ်ချုပ် ကျော်သက်နှင့် ဗျူဟာမှူး စောဆန်းအောင်အဖွဲ့ကို တပ်မတော်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF) ပူးပေါင်း၍ နယ်မြေ ရှင်းလင်း
12/07/2015 09:32 / Leaveacomment
တပ်မတော်နှင့် DKBA ထိတွေ့ တိုက်ခိုက်မှု ၃၉ ကြိမ်ဖြစ်ပွား၊ နှစ်ဖက် ကျဆုံးမှုရှိဟု ထုတ်ပြန်
အာရှလမ်းမကြီး (ဓာတ်ပုံ- နိုင်မောင်ဇော်)POLITICS, LAW & MILITARY
မြဝတီ-သင်္ကန်း ညီနောင် – ကော့ကရိတ် လမ်းဟောင်းနှင့် အာရှ လမ်းသစ်များတွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်နှင့် ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် (DKBA) တို့ တိုက်ပွဲပေါင်း အကြိမ် ၃၉ ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီး နှစ်ဖက် အကျအဆုံး များရှိခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်က ယနေ့ သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် (DKBA) ဗိုလ်ချုပ် ကျော်သက်နှင့် ဗျူဟာမှူး စောဆန်းအောင်အဖွဲ့ကို တပ်မတော်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF) ပူးပေါင်း၍ နယ်မြေ ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဇူလိုင် ၂ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ယနေ့အထိ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု လမ်းဟောင်းပေါ်၌ ၁၉ ကြိမ်နှင့် အာရှလမ်း သစ်ပေါ်၌ ၂၀ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တပ်မတော်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်အချို့ အကျအဆုံးနှင့် ထိခိုက် ဒဏ်အချို့ရရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
DKBA အဖွဲ့ထံမှ အရှင်ဖမ်းမိ ၃ ဦး၊ အလောင်း ၄ လောင်း၊ လက်နက်မျိုးစုံ ၆ လက်၊ ခဲယမ်းမျိုးစုံနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိသည်။
လမ်းသစ် လမ်းဟောင်း နှစ်ခုစလုံးအား ရှင်းလင်းခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ဇူလိုင်လ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲတွင် မြဝတီ-သင်္ကန်းညီနောင်-ကော့ကရိတ် လမ်းဟောင်းအား လည်းကောင်း၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် လမ်းသစ်အား လည်းကောင်း ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကာ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ကုန်စည် စီးဆင်းမှုနှင့် အများပြည်သူ ပုံမှန်အတိုင်း သွားလာလျက်ရှိသည်။
အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဒေသလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရန် အာရှလမ်းသစ်မှ သွားရောက်ရန်အတွက် ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားပြီး တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်စဉ် တစ်ဖက်မှ စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
လက်ရှိ အာရှလမ်းမကြီးပေါ်တွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားမှုများမရှိဘဲ ခရီးသွားပြည်သူများ သွားလာခွင့် ပေးထားကြောင်း၊ ကော့ကရိတ်ဘက်တွင်သာ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ကရင်ပြည်နယ် နယ်ခြား စောင့်တပ်ဖွဲ့ (BGF) ဗိုလ်မှူး နိုင်မောင်ဇော်က ပြောကြားသည်။
မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အာရှလမ်း မကြီးအသစ်ကို ဇူလိုင်လအတွင်း ထိုင်း-မြန်မာ ၂ နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများ ပူးပေါင်း ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိသည့်အတွက် အစိုးရတပ်များ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ပြီး ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ချိန်၌ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အာရှလမ်းမကြီး တရားဝင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း ခရီးသွားပြည်သူများ သွားလာခွင့် ပေးထားလျှက် ရှိသည်။
ခရီးသွား ပြည်သူများ လွယ်ကူ ချောမွေ့စွာ ခရီးသွားနိုင်ရေး၊ နယ်စပ်ဒေသ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်ချောမွေ့စေရေး နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အာဆီယံ ဒေသအတွင်းရှိ နိုင်ငံများနှင့် ကူးလူး သွားလာနိုင်ရေးတို့အတွက် မြဝတီ-သင်္ကန်းညီနောင်-ကော့ကရိတ် အာရှ လမ်းသစ်အား နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်း၍ ဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (Xinhua)
ကရင်ပြည်နယ်မှာ DKBA နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား
12/07/2015 09:09 / Leaveacomment
DKBA ကလို့ထူးဘော တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ စစ်ရေးပြနေစဉ်
DKBA ဒီမိုကရေစီအကျိ်ုးပြု တပ်မတော်တပ်တွေနဲ့ အစိုးရတပ်တွေအကြား အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားတာမရှိပေမယ့် တောင်ကြောတွေပေါ်မှာတော့ ဒီနေ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ DKBA တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်သက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။
DKBA တပ်တွေအနေနဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ နေရာယူထားတာကို တောင်ကြောပေါ်ကို ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရပေမယ့် မနေ့ကညပိုင်းနဲ့ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းတွေမှာ အစိုးရဘက်က လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ပြီး မွန်းလွဲ ၂ နာရီနောက်ပိုင်းမှာ လူပါတက်လာတာကြောင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့ DKBA တပ်ဖွဲ့အရာရှိ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်သက် က ပြောပါတယ်။
“တိုက်ပွဲအခြေအနေက ဒီညနေက သူတို့တက်လာပစ်တယ်ဗျ ကျနော်တို့ နေရာမှာနော်၊ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်တဲ့လူလည်းတက်လာတယ်နော်၊ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှမလုပ်ပါဘူး၊ ကျနော်တို့ကို ပထမ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်တယ်၊ ကျနော်တို့နေရာမှာပဲ ကျနော်တို့ပြန်လာနေတယ်၊ သူတို့ကတောင်မှလာပစ်နေရင် ကျနော်တို့ ကပြန်ပစ်မယ် ဒါပဲရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ဆုတ်ပေးလိုက်တယ်လေ၊ မဟုတ်ရင်တော့ လူထုတွေဘာတွေ ဒုက္ခရောက်မှာကြောက်လို့ ဆုတ်ပေးလိုက်တာလေ”
တိုက်ပွဲမှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေ ပါဝင်ခြင်းမရှိပဲ ဒေသခံအစိုးရတိုင်းတပ်ရင်းက ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ် ။ ကော့ကရိတ်ဒေသက တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ရာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ကစလို့ တိုက်ပွဲ ၂၉ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ခုချိန်မှာ အာရှလမ်းမကြီးကို ပြန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ KPNS ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင် ၂၅ ဖွဲ့က အစိုးရအနေနဲ့ အာရှလမ်းမကြီးကို တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူပြီး သဘောတူညီချက်တွေ အတိအကျရရှိပြီးမှသာ ဖွင့်လှစ်သင့်တယ်လို့ ဇူလိုင်လ ၁ဝ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာရှလမ်းမကြီးဟာ ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ KPNS အဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာ ချက်မှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့က တိုင်းပြည်ကို ပြောကြားသွားတဲ့ ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်အရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ရေးထိုးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နိုင် လိမ့်မယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က အခက်အခဲတွေ အများကြီးကျော်လွှားရဦးမယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် ဦးနိုင်ဟံသာကို ဦးတင်အောင်ခိုင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
အစိုးရတပ်နဲ့ DKBA ကြား တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ်
ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ကစတင် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အစိုးတပ်နဲ့ DKBA ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု တပ်မတော်တို့ကြား ဖြစ်ပွားနေ တဲ့ တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့ မနေ့က ကော့ကရိတ်မြို့မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမယ့် ဒီနေ့ အစိုးရဘက်က လက်နက် ကြီးတွေနဲ့ ဆက်လက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ DKBA ကပြောပါတယ်။
မနေ့က ဆွေးနွေးပွဲမှာ DKBA ပိတ်ထားတဲ့ မြ၀တီ-ကော့ကရိတ်လမ်းကို ဖွင့်ပေးဖို့ အစိုးရဘက်က တောင်းဆို တာကြောင့် ဒီကနေ့မွန်းတည့်ချိန်မှာ ပိတ်ထားတဲ့ လမ်းနှစ်လမ်းထဲက လမ်းဟောင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လမ်းပြန်ဖွင့်ပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အစိုးရဘက်က ခရီးသည်တွေသွားလာတဲ့ လမ်းဘက်ကို လက်နက် ကြီးနဲ့ စတင် ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ DKBA ထောက်လှမ်းရေးမှူး ဗိုလ်ကြီး စောသရီးထူးက ပြောပါတယ်။
“ဒီလမ်းကိုဖွင့်ပေးပါလို့ ကျနော်တို့ကိုပြောတယ်၊ ကျနော်တို့ DKBA က သူတို့ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ကျနော်တို့ က သူတို့ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်၊ ကျနော်တို့ဖွင့်ပေး တာနဲ့ ၅ မိနစ်၊ ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်၊ မောင်းလာ တဲ့ ကားတွေကျနော်တို့ဆီကို ရောက်လည်းရောက်ရော သူတို့လည်းပစ်ရော၊ ဒါက ကျနော်တို့ကို ပစ်တာမဟုတ် ဘူး ပြည်သူကို သက်သက်ပစ်နေတာ”
အခုလိုလက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်တာဟာ စကခ ၁၂ လက်အောက်ခံ၊ ခမရ ၅၄၉ က ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အစိုးရတပ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် DKBA တို့ကြား တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ တပ်ခရိုင်မှာ ထိုင်းစစ်တပ်က မြန်မာနဲ့ နယ်စပ်တလျှောက် တပ်တွေဖြန့်ချ ထားကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းက ဖေါ်ပြပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေဟာ မဲဆောက် ခရိုင် တဖက်ကမ်း၊ ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ်ကနေ မိုင် ၂၀ နှီးပါး အကွာမှာ ဖြစ်ပွားနေ တာကြောင့် ထိုင်းဘက်မှာ တပ်လှန့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေ မစခင် အစိုးရတပ်က စစ်သည် သုံးရာဝန်းကျင်ကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ အတူ ချထားခဲ့တယ်လို့လည်း ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းက ဖေါ်ပြပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေမယ့် အစိုးရတပ်အနေနဲ့ မော်လ မြိုင်၊ မြ၀တီနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆက်စပ်နေတဲ့ လမ်းသစ် ကနေ DKBA တပ်ဖွဲ့ကို ဖယ်ရှားချင်လို့ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း ရင်းမြစ် တစ်ခုက ပြောပါတယ်။ အဲဒီလမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲကို ဒီလကုန်ပိုင်းမှာ အခမ်းအနားနဲ့ ဖွင့်လှစ်ဖို့ အစိုးရက စီစဉ် ထားတယ်လို့လည်း ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းက ဖေါ်ပြပါတယ်။
ဒီအတွင်း မြ၀တီမြို့မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ DKBA ဆက်ဆံရေးရုံးက ဒုတိယ တာဝန်ခံ ဦးသန်းအောင်ကို မြ၀တီ အခြေစိုက် ၂၇၅ တပ်က လာရောက်ခေါ်ဆောင် သွားပြီး၊ ရဲစခန်းမှာ ချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ သတင်းတွေအရ ဦးသန်းအောင်ကို မတရားသင်းဆက်သွယ်မူပုဒ်မ ၁၇-၁နဲ့ အရေးယူထားတယ်လို့ ဗိုလ်ကြီး စောသရီးထူး က ပြောပါတယ်။
အစိုးတပ်နဲ့ DKBA ကြား တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး DKBA ထောက်လှမ်းရေးမှူး ဗိုလ်ကြီး စောသရီးထူး ကို ဦးတင်အောင်ခိုင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
အစိုးရတပ်နဲ့ DKBA ကြား တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်
မြ၀တီနဲ့ ကော့ကရိတ် ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အာရှလမ်းသစ်အနီးမှာ အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့တွေ မနေ့မနက်အစောပိုင်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နှစ်ဘက်ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ DKBA တပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာဟာ အစိုးရစစ်တပ်က လူကြီးလမ်းကြောင်းရှိတဲ့အတွက် အာရှလမ်းသစ်မှာ တပ်စွဲထားတဲ့ DKBA တပ်ကို ဖယ်ခိုင်းရာမှာ၊ DKBA က ငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးကြီး စောဆန်းအောင်က ပြောပါတယ်။
“လုံခြုံရေးယူပြီးမပြန်မှာ ကျနော်တို့က စိုးရိမ်တယ်၊ သူတို့နေရာယူလိုက်လို့ရှိရင် မပြန်တော့ဘူး၊ ဟိုတလော ကယူတယ်၊ နှစ်ရက် သုံးရက်ဆိုပြီး ဆယ်ရက် ဆယ့်ငါးရက်ကြာသွားတယ်၊ အဲ့ဒါတွေကျနော်တို့စိုးရိမ်တယ်၊ ကျနော်တို့မြို့ထဲမှာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာလည်းမရ ဒီတောတောင်ထဲမှာလဲ နေလို့မရဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုပြော ရမလဲ ဖိနှိပ်မှုအဲ့လိုခံရတာတွေကို တုန့်ပြန်တာပေါ့”
အစိုးရတပ် စကခ ၁၂ လက်အောက်ခံ ခမရ ၂၃၁ က လက်နက်ကြီးနဲ့ စပစ်ပြီးတဲ့နောက် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွား ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
DKBA ဘက်က ၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး အစိုးရတပ်ဘက်မှာလည်း အထိအခိုက်ရှိနိုင်ပေမဲ့၊ အတိအကျမသိရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
တိုက်ပွဲကြောင့် အာရှလမ်းသစ် မနေ့က စတင်ပိတ်သွားခဲ့ပြီး ခရီးသွားတွေ လမ်းဟောင်းကသာ သွားလာနေကြ တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ယောက် NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦး
12/07/2015 08:56 / Leaveacomment
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂ဝ၉)
NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက် အစီအစဉ် ကို RFA က ၂ နှစ်ကြာတင်ဆက်ခဲ့ရာမှာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းမတိုင်မီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချင်းပြည်နယ် သွားရောက်စဉ်က အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဒီအပတ် အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက် ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၂ဝ၉) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂ဝ၈)
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး အစီအစဉ်မှာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်က ဒပဲယင်းအရေးအခင်းမတိုင်မှီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရခိုင်ပြည်နယ် သွားရောက်စဉ်က တောင်ကုတ်မြို့မှာ နယ်မြေတာဝန်ကျစစ်တပ်နဲ့ ညှိနှိုင်းပြောဆိုခဲ့ပုံကို ဒီအပတ်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက် ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၂ဝ၈) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂ဝ၇)
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦး အစီအစဉ်မှာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်က ဒပယင်းအရေးအခင်းမတိုင်မှီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် သွားရောက်စဉ် အတွေ့အကြုံတွေကို ဒီအပတ်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက် ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၂ဝ၇) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂ဝ၆)
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦး အစီအစဉ်မှာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွှတ်လာပြီး အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ စတင်ခဲ့ပုံကို ဒီအပတ်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက် ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၂ဝ၆) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂ဝ၅)
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး အစီအစဉ်မှာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်က ပါတီတွင်းအယူအဆကွဲလွဲမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပုံကို ဒီအပတ်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၂ဝ၅) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂ဝ၄)
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး အစီအစဉ်မှာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်ပြီး ဆရာ ဦးဝင်းတင်နဲ့ ပူးပေါင်းကာ ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ပုံတွေကို နားဆင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၂ဝ၄) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂ဝ၃)
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး အစီအစဉ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ ငြင်းပယ်မှုကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စစ်အစိုးရအကြား ညှိနိုင်းမှုတွေ ပျက်ပြားသွားခဲ့ပုံကို ဒီအပတ် နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၂ဝ၃) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂ဝ၂)
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦး အစီအစဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗိုလ်မှူုးချုပ်သန်းထွန်းဦးဆောင်တဲ့ စစ်အစိုးရအရာရှိအဖွဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပုံကို ဒီအပတ်နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၂ဝ၂) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂ဝ၁)
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး အစီအစဉ်မှာ ကလေးထောင်က လွတ်မြောက်လာပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ဆက်လက်နေထိုင်ရပုံကို ဒီအပတ် နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက် ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၂ဝ၁) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂ဝဝ)
၂ဝဝ၃ မေလ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းအပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် ကလေးထောင်မှာနေရစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆေးဝါးနဲ့ အစားအစာတချို့ပေးပို့ခဲ့ပုံနဲ့ ရဲဘက်စခန်းက အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ဆိုးဝါးလှတဲ့ဘဝတွေအကြောင်း ဒီအပတ်နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၂ဝဝ) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၁၉၉)
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး အစီအစဉ်မှာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ဒပယင်းလုပ်ကြံမှုအပြီး ကလေးထောင်မှာကြုံရတဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကို ဒီအပတ်နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၁၉၉) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၁၉၈)
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး အစီအစဉ်မှာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုအပြီး ကလေးထောင် ပြောင်းရွှေ့ခံရပုံတွေကို ဒီအပတ် ဆက်လက်နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက် ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၁၉၈) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၁၉၇ )
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးက သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး အစီအစဉ်မှာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်မေလ ၃ဝ ရက်နေ့က တွေ့ကြုံခဲ့ရပုံတွေကို ဒီအပတ် ဆက်လက်နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၁၉၇ ) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၁၉၆ )
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ပြောစကားတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး အစီအစဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွင်း၂ဝဝ၃ ခုနှစ်မေလ ၃ဝ ရက်နေ့က ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ကျည်ရွာမှာ အစိုးရသြဇာခံတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုက လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပုံကို ဒီအပတ်နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၁၉၆ ) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၁၉၄ )
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ပြောစကားတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦး အစီအစဉ်မှာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်မေလ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွင်း ဒီပဲယင်းမှာ အစိုးရသြဇာခံတွေ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ ၃ဝ ရက်နေ့ စောစောပိုင်း အတွေ့အကြုံတွေကို ဒီအပတ်နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၁၉၄) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၁၉၃ )
လက်ရှိ NLD နာယက၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ပြောစကားတွေကို အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး အစီအစဉ်မှာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်မေလ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွင်း မုံရွာမြို့အရောက် တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဒီအပတ်နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၁၉၃) နားထောင်ရန်။
ပြည်သူ့ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၁၉၁ )
၂ဝဝ၃ ခုနှစ်မေလက မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွင်း မတ္တရာမြို့ အရောက် ကြုံတွေ့ရပုံတွေကို ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ယောက် အစီအစဉ်မှာ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဦးတင်ဦးက တင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
အပိုင်း (၁၉၁) နားထောင်ရန်။